Shaqo - Gpedia, Your Encyclopedia
Haku khaldin "Howl"
Shaqo (Af Ingiriis : job ama occupation) waa heerka darajada qof kaga jiro bulshada taasi oo ah howsha qofkaasi ka shaqeeyo si uu u hello mishahar (abaalmarin) ku maareeyo ama taageero baahida nolosha maalinle.
Shaqadu waa waajibaadka saaran qof ka mid ah bulshada taasi oo abaalmarin lacag ah qofkaasi ka qaato ama faa'iido nooc kale ah ugu jirto. Tusaale, macalinku wuxuu ka shaqeeyaa dugsiga halkaasi oo uu wax ku baro ardey.
Shaqaale alaab ka dajinaya wiish
Shaqaale waa qofka shaqo cayiman qabta si uu u helo joornaati ama qarash lacageed oo awal lagu heshiiyay, kaasoo u dhigma shaqada uu qabtay oo ahaan karta shaqo warshad laga shaqeeyay ama ka ballaaran sida mashruuc oo kale, qofkaas waa mid ama unug ka mida wax soo saarka mashruucaas ama warshadaas.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shaqo&oldid=170307"